Semalt Expert: WebHarvest, 5 Mazano Anonyanya Kuda Bhizimisi Rako
Dhaped data inobvumira varume vebhizimisi kuita zvisarudzo zvakanaka zvakakosha kuti kubudirire. Zvisinei, vazhinji vevatengesi nevatungamiriri vanodzivisa kushandiswa kwevashandi vemawindo evhudziro pamusana pemabasa avo mashomanana uye zvikamu. Kusiyana nematombo iwayo, WebHarvest inogona kuvimbika uye yakarurama yedhigiriro yebasa. Inogonesa varume vebhizimisi kutora uye kuongorora dhesi, uye kubata nemabasa anonyanyisa. Iyi yesebhisi inoshandisa zvose zvinyorwa kushandiswa uye HTML teknolojia uye zvinyorwa zvinyorwa kubva pamapeji ewebhu - latest no deposit bonus codes wizbet. Mazano ayo makuru anotaurwa pasi apa:
1. Inounganidza ruzivo pamusoro pevakwikwidzi vako:
neWebHarvest, unogona nyore nyore kuunganidza ruzivo pamusoro pevakwikwidzi vako, zvigadzirwa, mazano, maitiro ekutengesa, mazai anotengesa uye maitiro ekupedzisira. Muchidimbu, unosvika pakuziva zvose pamusoro pevadzivisi vako uye unogona kuita sarudzo dzakanaka kukura bhizinesi rako. Indaneti yakazadzwa nehuwandu, uye kune nhamba huru yemakwikwi ekubata nayo. WebHarvest ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti uunganidze uye uronga dhesi pamusoro pemakwikwi ako makuru.
2. Machine learning teknolojia:
WebHarvest inonyanyozivikanwa nekuda kwekombiyuta yekudzidza mitambo uye inokwanisa kuongorora data muurongwa hwakarongeka uye hwakarongeka. Iwe unongoda kujekesa data kana kuisa URL yaunoda kuparadzira, uye WebHarvest inotanga kuita mabasa ayo uye ichikupa iwe inogona kuverengwa uye yakagadzikana munyaya yemaminitsi.
3. Kutsvaga nekutsvaga kwakavimbika:
Kumunhu webhizimisi, zvakakosha kuunganidza uye kubvisa ruzivo munguva pfupi. Dzimwe nguva iye / iye anofanira kusangana nenguva dzakatadza uye anotarisana nematambudziko akawanda. Mumamiriro ezvinhu akadaro, unogona kushandisa WebHarvest uye ita basa rako. Chimwe chezvinhu zvakasiyana-siyana zvechirongwa ichi ndechokuti inowedzera data yako mumasekondi mashomanana uye inogona kuita kusvika kumabasa 1200 panguva. Mune mamwe mazwi, unogona kuparadzira mapeji akawanda ewebhu sezvaunoda uye kuita mabasa ako mumaawa mashomanana, kusangana nenguva yako yekutora zviri nyore. Mukuwedzera, zvigumisiro izvi zvigadzirwa zvinopa uye zvakavimbika. WebHarvest inogadzirisa zvose zviduku uye zvikanganiso zvakakura zvinowanzoita kuti iwe usakanganiswa uye unogona kuverenga.
Kana uchangotanga website yekutengesa uye uchida kuunganidza mashoko kubva kuAmazon ne eBay, unofanira kusarudza WebHarvest. Nebasa iri, unogona kuwana nyore ruzivo pamusoro pezviuru zvezvigadzirwa, zvinotsanangurwa, mifananidzo uye kunyange kuongorora kwevatengi. Zvose izvi deta zvinowanikwa pakarepo uye iwe uchakwanisa kuzvigamuchira nenzira yematafura uye mazita. Data yakarurama inotonga nyika uye WebHarvest inopikira mhinduro dzakavimbika uye dzakarurama, zvichikubatsira kukura bhizinesi rako munguva pfupi.
Bhizimisi anofanira kutarisira nhamba yakawanda yemabasa uye anofanira kukwanisa kutema mimwe mapeji mumaminitsi. Anofanirwa kutora deta kubva pazvitoro zveIndaneti uye mashizha evanhu. WebHarvest ine unyanzvi hwokugadzirisa hunoita kuti basa rako rive nyore. Iwe unogona kushandisa chigadzirwa ichi kuti zvive nemigumisiro inobatsira uye unokwanisa kuwedzera mapeji akawanda ewebhu panguva. Kunyanya, iwe unogona kutsvaga geographical uye topographical ruzivo nemusangano uyu uye uchitendeuka nenzira yakashandiswa.